Ogoow Xogta kulamada caawa ee Champions League iyo rajada koox kastaay ugu soo bixi karto wareega 16-ka+Sawirro
Thursday, January 24th, 2019 - 10:07:30
Wednesday December 06, 2017 - 09:07:43 in Wararka by Hussein Hadafow
Waxaa caawa si rasmi loo soo gebogabyn doona wareega Group-yada koobka kooxha qaaradda Yurub 2017-18, waxaana ciyaari doona Groupyada E , F, G iyo H.
Halkan ka aqriso xogta qeyb kasta iyo rajada koox walba leeadhay:
Group E Liverpool 9, Seville 8, Spartak Moscow 6 Maribor 2
Maribor vs Sevilla, Liverpool vs Spartak Moscow
Liverpool ayaa kusoo baxda barbaro hadii ay guuleysatana waxay kusoo gudbeysaa kaalinta koowaad, sidoo kale waxay kaalinta koowaad kusoo bixi kartaa hadii ay barbaro gasho isl markaana Seville laga adkaado.
Haddii Liverpool laga adkaado way ka hareysaa tartanka, hadii aan aan sidoo kale laga abdin Seville.
Seville ayaa dhankeeda kusoo bixi karta barbaro haddii aysan Spartak Moscow badin.
Liverpool hadii ay barbaro gasho oo ay Seville badiso waxay weyneysaa kaalinta koowaad.
Spartak Moscow kaliya guul ayeey waxy ku leedahay waxayna kusoo bixi kartaa kaalinta koowaad hadii ay ka guuleysato , isla markaana aysan Seville badin, haddiise aysan guuleysan waxay ku dhameysan doontaa kaalinta saddexaad taasoo ka dhigan in ay Uefa Europa League ka qeyb gali doonto.
Group ; Manchester City 15, Shaktar 9, Napoli 6 Feyenoord 0
Shakhtar Donetsk vs Manchester City, Feyenoord vs Napoli
Man City ayaa kaalinta koowaad horey u xaqiijisay waxaana kusoo biiri kara Shakhtar Donetsk haddii ay kooxda Pep Guardiola ka hor istaagaan guushooda lixaad ee wareegan.
Kooxda Reer Ukraine ayaa sidoo kale kusoo bixi karta haddii Napoli ay garaaci weydo Feyenoord.
Guusha Napoli ayaa ku xernaaan doonta guuldarada Shakhtar waxayna u noqon doontaa natiijo wacan maadaama xaga kulamada fool ka foolka labada koox ay ku gacan sareyso.
Group G Besiktas 11, Porto 7 , RasenBallsport Leipzig 7, Monaco 2
RB Leipzig vs Besiktas, Monaco vs Porto
Besiktas ayaa xaqiijiysay booskeeda usoo bixida wareega 16-ka iyadoo kaalinta kowaad kusoo gudubtay, waxaana lagu dagaalamayaa kaalinta labaad.
Porto ayaa soo baxyesa haddii ay guuleysato maadama kulamada fool ka foola ay kaga gacan sareyso Leipzig hadii ay iyana guuleysato
Leipzig ayaa u baahan in ay garacdo Besiktas isla markaanaw axay gacan caawin uga baahan tahay Monaco oo garaacda ama barbaro ku celisa Porto.
Leipzig waxay sanaddki u horeeyay ka qeyb qaadaneysaa tartanka Champuions League waxayna ku rajo weyn tahay in ay wareega 16-ka gaarto taaasoo taariikh wanaagsan u noqon doonta.
Group H – Tottenham 13, Real Madrid 10, Dortimund 2, APOEL Nicosia 2
Real Madrid vs Borussia Dortmund, Tottenham vs APOEL Nicosia
Tottenham ayaa horeyba u xaqiijisay kaalinta koowaad ee Group-ka xitaa hadii hadii laga adkaato maadaama ay Real kaga wanaagsan tahay kulamadii ay ciyareen kadib markii ay 4 dhibcood ka qaadatay kooxda Horyaalak qaarada Yurub.
Real ayaa sidoo kale iyana xaqijisay booskeeda labaad ee Group-ka , sidoo kale Dortimund iyo APOEL Nicosia ayaa lagu kala saari doonaa natiijad ay caawa keensadaan madaama ay min 2 dhibcood oo qura ay leeeyihiin sidoo kalena y barbaro 1-1- ku dhameysteen kulamadii ay ciyaareen.
Dhammaan kulamada waxay dhici doonaan 10:45